Iningi wemikhosi ngaso sonke isikhathi sihambisana ukusebenza zomculo: umdanso, ukudansa, besina bethi: chants, amahlaya, imincintiswano. Ngokuvamile, i-izinhlobo ezahlukene yokuzijabulisa.
Omunye ethandwa kakhulu iholidi ukusebenza kuthiwa dancing nje. Eza kuzo zonke uhlelo ekhonsathini. Lokhu abantu nangemidanso phakathi nemikhosi efana tratsionnyh Shrovetide Russian noma Ivan Kupala. Noma ukudansa Shamanic emhlabeni botha umlilo phakathi okuzobe kudlalelwa imicimbi nokuphila amaNdiya. Noma abhanqiwe besina phakathi Prom. Kungase kube ukushintshashintsha yesimanje - "breakdance", "Hip-Hop", "Crank", njll, okuyinto eyenziwa abafana namantombazane amancane benza e zemicimbi emikhudlwana e-Day City kanye nentsha. Dance, kanye namaholide, kunezindlela eziningi. Kodvwa umbuto akusho ukuthi.
Bambalwa abantu ngeso lengqondo, kungamuphi umqondo nokulungisa kwanoma isiphi isenzakalo esinjalo. Phela, zonke okudingeka ucabange, ukubhala iskripthi, thola abahlanganyeli efanelekayo, ukuthola zasesiteji kunesidingo. Omunye imininingwane ebalulekile ngoba ngisho iholide encane, kodwa ezinhle esihambisana umsindo. Isikhathi esining impela isetshenziswa njengoba izingcezu assorted umculo, ngokuthi "Potpourri". Ukuze umdanso mncintiswano, imidwebo noma into efana nalokho Luhle. Mayelana naye sizobe ukukhuluma esihlokweni samanje.
Igama elithi "Medley" livela French imbiza-pourri, okuyinto uhumusha njengoba "sundries elixutshwe / isidlo prefabricated". Kamuva elithi atholwe kuhlobane ngokuqondile art. I Medley lokuqala esidalelwe ezihlukahlukene pop and zethusi bands. Khona-ke baqala ukuvela laqanjwa ehlanganisa ezihlukahlukene amashuni ethandwa.
Kukhona ukwahluka Medley ezilandelayo:
isiqeshana Instrumental, okuyinto yakhiwa eziningana motifs ethandwa kakhulu wemidlalo ye-opera, operettas kanye ballet, umculo umqambi ethize noma isitayela, kanye iculo, amamashi, njll
Ukudansa, ehlanganisa nemidanso eziningana. Njengoba umculo isetshenziswa ukudansa Medley.
Ngo ngomqondo ongokomfanekiso izwi esetshenziswa abonisa ukuthi Izingxube iyiphi heterogeneous.
Potpourri (dance ngokukhethekile) zinezikhathi yokuthi umculo kuzo akwenzeki, futhi ngemva kwenye. Phakathi amavesi ngokuvamile enziwa nemisipha elincane ukuxhuma izingxenye ezahlukene. Ngakho, akha okuqhubekayo isithombe nobuciko, nge isiqalo nesiphetho. It kungabuye kulekelelwa futhi umvuthwandaba ukuhwebelana ezahlukene semantic nangokomzwelo.
Manje umculo medleys sokudansa, isibonelo, inenani ukuthi kunzima ukwenza ihaba, ngoba ngokuhlanganisa zibe munye azifani ngesimo kanye namandla okubakhona izingcezwana eziyizinsalela, anganikeza esihambisana avumelanayo lonke mcimbi kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Cabanga indlela ngempumelelo zingase zifane Medley umdanso "Dances Kwezwe" e ukucutshungulwa ezifanele zomculo, azwakale kamtoti futhi onolwazi icala ethe njo. Uma wenza kanjalo konke ngendlela efanele, umbukeli uzothola eziphuma kulo mbukiso kwalibaleka, futhi uma kwenzeka iyophumelela.
Ngokwemvelo, eliphezulu Kuqhuma umdanso noma enye inombolo - kusenzima hhayi eziyikhulu amaphesenti isiqinisekiso sempumelelo, kodwa ingxenye yayo eziphathekayo. Phela, ngaphezu komsindo, ingxenye okubonakalayo umcimbi Kufanele futhi ukunambitheka kwako siqu "hook" izethameli.
Koker Dzho - Umculi IsiZulu blues iculo